Questions प्रश्नहरू तपाइँको वेबसाइट डिजाइन शुरू गर्नु अघि आफैलाई सोध्नुहोस् Martech Zone
वेबसाइट निर्माण एक कठिन कार्य हुन सक्छ, तर यदि तपाइँ यसलाई तपाइँको ब्यापारलाई पुन: मूल्या and्कन गर्ने र आफ्नो छविलाई तिखार्ने अवसरको रूपमा सोच्नुहुन्छ भने, तपाइँ तपाइँको ब्रान्डको बारेमा धेरै सिक्नुहुनेछ, र यसो गर्दा रमाईलो पनि गर्न सक्नुहुनेछ।
जब तपाइँ सुरू गर्नुहुन्छ, प्रश्नहरूको सूचीले तपाईंलाई सहि ट्र्याकमा पुग्न मद्दत गर्दछ।
तपाइँ तपाइँको वेबसाइट के पूरा गर्न चाहानुहुन्छ?
यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो जवाफ तपाईंले जवाफ दिनुभन्दा पहिले।
"ठूलो चित्र" को बारे मा सोच्नुहोस्। तपाइँको वेबसाइटबाट चाहिएको शीर्ष तीन चीजहरू कुन हुन्? (स :्केतः तपाईले यो सूची प्रयोग गरेर जवाफ फेला पार्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ!)
के तपाई ईट्टा र मोर्टार स्टोर हुनुहुन्छ जुन तपाईको स्थान र तपाईको स्टकमा रहेको जानकारी प्रदान गर्न आवश्यक छ? वा, तपाइँ तपाइँको ग्राहकहरु लाई चाँडै ब्राउज गर्न, शप गर्न, र तपाइँको साइटबाट खरीद गर्न सक्षम गर्न आवश्यक छ? के तपाइँका ग्राहकहरु प्रेरणादायक सामग्री खोजिरहेका छन्? र, के तिनीहरू अधिक सामग्रीको लागि ई-न्यूजलेटरमा साइन अप गर्न चाहन्छन्?
तपाईंको सबै आवश्यकताहरू कागजमा तल झर्नुहोस् र तिनीहरूलाई प्राथमिकता दिनुहोस्। त्यसो भए तपाईले यो सूची प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जब वेबसाइट प्रदायक, डिजाइनर र विकासकर्ताहरूको मूल्यांकन गर्नुहोस्।
बाँया देखि दायाँ: आधारभूत साइटले आवश्यक कुराकानी गर्दछ, एउटा ईकमर्स साइटले तपाईंलाई अनलाइन बेच्न अनुमति दिन्छ, र ब्लगहरूले तपाईंलाई सामग्री र विचारहरू साझा गर्न अनुमति दिन्छ।
तपाई कति खर्च गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईंको बजेट विचार गर्नुहोस् र लीप लिनु अघि सबै लागतहरूको मूल्यांकन गर्नुहोस्। निश्चित टीमको सदस्यहरुसँग मिलेर काम गर्न सुनिश्चित हुनुहोस् खर्चको उचित सूचीमा हथौडा गर्न। यस्तो हुन सक्छ कि तपाइँको बजेटले तपाइँको लागि धेरै निर्णय लिन्छ।
यदि तपाईं कडा बजेटमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंको शीर्ष आवश्यकताहरूको सूचीले तपाईंलाई प्राथमिकतामा पर्ने कुरा निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ। के तपाईंलाई एक सरल ल्यान्डिंग पृष्ठ, वा पूर्ण साइटको आवश्यकता छ? यदि तपाइँ टेक जानकार हुनुहुन्छ र अनुकूलनको आवश्यकता छैन भने, एउटा टेम्पलेटमा निर्मित एकल ल्यान्डि page पृष्ठले तपाईंलाई १०० / वर्ष भन्दा कममा चलाउन सक्छ। यदि तपाइँ अनुकूलन ब्याकइन्ड सुविधाहरुको साथ एक पूरा वेब अनुप्रयोगको डिजाइन र विकास गर्न आवश्यक छ भने, तपाईले सयौं घण्टा लिन सक्ने प्रोजेक्टको लागि $ १०० / घण्टा भन्दा बढी भुक्तान गरिरहनु भएको छ।
तपाईसँग कति समय छ?
एक सामान्य नियमको रूपमा, वेबसाइट निर्माणको लागि लिड-टाइम छोटो, कम लागत। त्यसोभए यदि तपाइँको वेबसाइट अधिक जटिल छ - उदाहरणका लागि यदि यसले धेरै फरक पृष्ठहरू विज्ञापन र उत्पादनको ठूलो दायरामा समावेश गर्दछ भने - तपाइँ अनावश्यक रूपमा उच्च शुल्कहरू जोगिन एक उचित सुरुवात कार्यक्रम सेटअप गर्न सुनिश्चित गर्न चाहानुहुन्छ।
त्योले भन्यो, वेबसाइट निर्माण गर्न सँधै लिनुपर्दैन। मानौं तपाईंसँग केहि हप्ता मात्र छ: तपाईं वर्डप्रेस वा अर्को प्लेटफर्मबाट प्रिबिल्ट टेम्प्लेटको लागि अप्ट इन गर्न सक्नुहुनेछ। सरल, रमणीय ब्लगहरू छिटो सेटअप गर्न सकिन्छ, र तपाईं पनि केही कस्टम तत्वहरू समावेश गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाइँ तपाइँको वेबसाइट एक विशिष्ट मिति वा घटना को साथ सुरू समय को आवश्यकता छ भने, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ त्यो अगाडि संचार गर्नुहुन्छ। तपाईंले गतिको बदलामा केही कार्यक्षमता त्याग्न आवश्यक पर्दछ।
तपाईंसँग स्पष्ट ब्रान्ड छ?
तपाईंको वेबसाइटले तपाईंको ब्रान्ड स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित गर्नुपर्दछ जसले गर्दा ग्राहकहरूले तपाईंलाई चिन्न र सम्झन सक्दछन्। यो स्पष्टता दीर्घकालीन सफलताको लागि तपाईंको ब्रान्ड निर्माणको लागि महत्वपूर्ण छ। तपाईको लोगो, हेडर छविहरू, मेनू शैलीहरू, र color्ग प्यालेटहरू, टाइपोग्राफी, छविहरू, र सामग्री सबै तपाइँको ब्रान्ड छविमा योगदान पुर्‍याउँछन्, र यो सुसंगत हुनुपर्छ।
यदि तपाइँले पहिले तपाइँको ब्रान्डमा भिजुअल डिजाइनरसँग काम गर्नुभएको छैन भने वेबको केही आधारभूत स्कुरिंग गर्नुहोस् राम्रो ब्रांडका राम्रो उदाहरणका लागि ब्रान्ड जहाँबाट तपाइँ प्रेरणा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाइँ देख्नुहुनेछ कि वेबसाइटहरू कसरी कम्प्युटरको र color्ग, फन्ट, र भिजुअल छनौटहरूको कारण वेब मार्फत फरक देखिन्छन्। तपाइँको कम्पनीको रूप र तपाइँको वेबसाइटमा डिजाइन छनौट मार्गनिर्देशन मद्दत गर्न तपाइँको दिमागमा महसुस गर्न स्पष्ट छ। यदि तपाईंलाई मद्दतको आवश्यकता छ भने,d99 डिजाईनहरूले डिजाइन प्रतियोगिताको रूपमा सेवा प्रदान गर्दछ जसले तपाईंलाई तपाईंको लोगोबाट सुरू गरेर बिभिन्न ब्रान्ड "हेर्न र अनुभव" पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ।
मलाई कुन सामग्री चाहिन्छ?
सामग्री निर्माणमा ढिलाइले वेबसाइट सुरूवातहरू लाई पछाडि धकेल्न सक्दछ। तपाईंको वेब डिजाइनर वा विकासकर्ताले तपाईंको प्रतिलिपि लेख्दैन, तपाईंको पोर्टफोलियो फोटोहरू चयन गर्दैन, वा तपाईंको भिडियो प्रशंसापत्र सँगै राख्दैन। चाँडै सूची बनाउनुहोस् सबै सामग्री तपाईंले जम्मा गर्नुपर्नेछ (वा उत्पन्न गर्न), र समयसीमा र कार्यहरूको सख्त तालिका। यो पनि, तपाइँको ब्रान्ड र तपाइँको लक्षित दर्शकको आवश्यकता अनुरूप हुनु पर्छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं बच्चाहरूको लुगा बेच्नुहुन्छ भने तपाईंको सामग्री आमा, बुबा, र हजुरआमासँग बोल्नु पर्छ। र, तपाइँको फोटोग्राफीले तपाइँको कपडाको रेखामा सुन्दर देखिने मुस्कुराउने बच्चाहरूको छविहरू प्रतिबिम्बित गर्नुपर्दछ।
तपाइँ के माया गर्नुहुन्छ - र घृणा गर्नुहुन्छ?
सबै ट्रेन्डहरू र भिजुअलहरू र लेआउटहरू नोट गर्नुहोस् जुन तपाईं अन्वेषण गर्न र बेवास्ता गर्न चाहानुहुन्छ, र तपाईंले आफ्नै हातले मन पराउने वेबसाइटहरूका उदाहरणहरू छन् (र तपाईंलाई किन उनीहरू मनपराउनुहुन्छ भनेर वर्णन)। Pinterest मा "वेब डिजाइन" को रूपमा खोजी प्रयास गर्नुहोस् तपाइँ सुरू गर्न। गर्नुहोस् र नगर्नुहोस् को एक स्पष्ट सेटले डिजाईन प्रक्रिया धेरै सजिलो बनाउँदछ, र तपाईंको प्राथमिकताहरू समय भन्दा पहिले नै राख्नुमा तपाईं सडकमा धेरै अनावश्यक टाउको दुख्न सक्नुहुन्छ।
प्रेरणादायक वेब डिजाइनको लागि Pinterest खोजी।
टैग: ब्रान्डबजेटयोजनाएक वेबसाइट योजना गर्दैसमय अवरोधहरूवेब डिजाइन बजेटवेबसाइट डिजाइन योजनावेबसाइट गोलहरूवेबसाइट प्रेरणावेबसाइट योजना